I-Duck Haven - Ukuhlala kweFama - iimayile ezi-7 ukusuka kwi-I-75 - I-Airbnb
I-Duck Haven - Ukuhlala kweFama - iimayile ezi-7 ukusuka kwi-I-75
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDona
UDona ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Wamkelekile kwi-Duck Havens Airbnb
Siyintsapho encinci eqhuba indawo yezilwanyana zasendle eyi-501c-3. Ngexesha lokuhlala kwakho uza kukwazi ukubona izilwanyana ezininzi ezikhethekileyo nezinomngcipheko omkhulu, njengePatagonia Mara, uhlobo lokuqala lweegusha eziye zaziswa eMerika, ii-pheasants, ii-peacocks, iintlobo ezahlukeneyo zeedada, iintlobo ezincinci nezinkulu zezilwanyana, amahashe, iigusha ze-mouflon, nokunye okuninzi.
Ifama yethu ikwenye yeendawo ezintle zaseFlorida, kunye neTrilby Trails ekumgama wemizuzu nje omnye.
I-Duck Haven yindlu yesitudiyo enebhedi enkulu yokumkanikazi, kunye neshawari egcweleyo. Sinike zonke izinto onokuthi uzifune ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye uphumle. Sine-oveni yokuhambisa, i-microwave ngaphezulu, ipleyiti eshushu, umenzi wekofu, kunye nesikhenkcezisi esipheleleyo ngaphakathi kwindlu yazo zonke iimfuno zakho zokupheka.
Yiza uzonwabele ukuhlala ngaphandle ngasemhadini womlilo, wonwabele umboniso omangalisayo weenkwenkwezi, okanye ukonwabele ukuphumla njengoko ubukele iigusha ezikufutshane kunye namahashe njengoko esitya ingca ngokuthe ngcembe emadlelweni.
4.92 · Izimvo eziyi-121
Sihamba ngemizuzu eli-15 ukusuka kwiindawo zokutyela ezininzi zokutya okukhawulezayo, iindawo zokutyela zasekhaya ezinokutya okumnandi kakhulu, kunye nevenkile yokutya. Sikwakude nemizuzu ukusuka kwifama encinci ye-Everglades ukuba uthatha inxaxheba komnye weminyhadala emininzi ebanjelwe apho.
Umbuki zindwendwe ngu- Dona
Sisoloko sifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi kuzo naziphi na iimfuno onokuba nazo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dade City